Mila vonjy ara-tsosialy sy ara-pihariana ny kaomina Mahajamba | Région Boeny
Vaky vokatry ny ora-mikija nanomboka ny 18 janoary 2015 sy ny rivo-doza Chedza ny fefilohan’ny reniranon’i Mahajamba ao amin’ny Distrikan’i Mahajanga II, Faritra Boeny ka niteraka olana goavana ara-tsosialy sy ara-pihariana any an-toerana amin’izao fotoana izao.
Dibon-drano avokoa ny Fokontany maro ao amin’ny Kaomin’i Mahajamba, ary anisan’ny voa mafy i Mahajamba-Usine, Ambodipamba sy Amboanio. Tanimbary maherin’ny 2000ha sy tani-katsaka 500ha no sifitrin’ny rano ka potika zato isan-jato ny voly.
Mitaraina mafy ireo mponina any an-toerana araka izany satria ilay atao hoe Périmètre rizicole izay havokavokaky ny toe-karenan’ny kaomina mihitsy no simba tanteraka hoy ny tatitry ny Ben’ny tanànan’i Mahajamba, Atoa Randrianandrasana Henri.
Fefiloha sy tatatra fivarinandrano mirefy 7km no mila fanajariana haingana hoy izy ary vonona hifanampy amin’ny fanjakana amin’ny fanarenana izany foto-drafi-trasa simba izany ny mponina ao amin’ny Fokontanin’i Mahajamba-Usine
Tsy niandry ela ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar fa nandefa solontena nitondra fanampiana vonjy maika milanja 5taonina ho an’ny traboina miisa hatrany amin’ny 2 500 olona. Fanampiana ara-tsakafo toy ny vary, tsaramaso, zezika, ambezo sy ny kojakoja andakozia niampy kits scolaires avy amin’ny Unicef no natolony.
Nandray ireo fanampiana ireo tany an-toerana ny Lehiben’ny Distrika Mahajanga II Atoa Fidimiafy Jean Marc sy ireo mpitsabo avy amin’ny Sampan-draharaham-panjakana misahana ny fahasalamam-bahoaka nankahery ireo traboina ary ny solontenan’ny sampandrahara iraisam-paritra misahana ny tahiry momban’ny fampandrosoana na ny Fid eto Mahajanga hijery ny simba tokony hamboarina.
Farany dia nanararaotra nanao fanentanana ny vahoaka ihany koa ny Lehiben’ny Distrika Mahajanga II mba hanantona ny biraon’ny Fokontany hanara-maso ny anarany ao amin’ny lisi-pifidianana.